FIRAISAMONIM-PIRENENA : Nanamafy fa an’i Madagasikara ny “Iles Eparses”
Nanamafy ny maha an’i Madagasikara ireo Nosy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana bodoin’i Lafrantsa koa ny firaisamonim-pirenena. 2 décembre 2019
Nambaran’izy ireo fa tokony hanaiky izany i Lafrantsa mialoha ny hanohizan’ny vaomiera iombonana handinika ny fomba fitantanana ireo Nosy Malagasy ireo. Nohamafisiny koa fa tsy azo iadian-kevitra ny maha an’i Madagasikara ireo Nosy ireo na ara-tsiansa izany na ara-tantara, indrindra eo anatrehan’ny lalàna iraisam-pirenena. Voaporofo sy fantatr’izao tontolo izao izany, hoy izy ireo, ary namafisin’ny fehin-kevitry ny firenena mikambana ny taona 1979. « Ho anay firaisamonim-pirenena, tsindrianay manokana fa tsy iadian-kevitra mihitsy ny maha an’i Madagasikara ireo Nosy ireo.
Tsy azo ivalozana fa antsika Malagasy ireo na inona na inona lazain’ny Frantsay », hoy Razakamanarina Ndranto, solontenan’ny firaisamonim-pirenena.
Nitondran’izy ireo fanamarihana koa ny mahakasika ny fihetsiky ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron : « Lazain’ny Frantsay fa faritra voaaro ireo ary nambarany koa fa handray an-tanana ny fiarovana azy ireo amin’ny fikajiana ny tontolo iainana izy. Toy ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka Malagasy izany ary toa te hilaza fa tsy mahay mitantana faritra voaaro isika. Tokony ho fantany anefa fa na mahay mitantana ny Malagasy na tsia dia antsika foana ireo Nosy ireo”, hoy hatrany ny nambarany.
Tsiahivina fa hisy ny filan-kevitra nasionaly hotanterahina amin’ny 9 ka hatramin’ny 11 desambra ho avy izao ka izay tapaka mandritra io filan-kevitra io no ho laha-dinika any Frantsa mandritra ny dinika manaraka. Nanamafy ny fiombonam-peony amin’ny fitondram-panjakana ny firaisamonim-pirenena ary mbola manao antso avo ho tohin’izay efa nambaran’ny lehiben’ny governemanta, hitondrana antotan-taratasy sy soson-kevitra mahakasika ny famerenana ireo Nosy ireo ho eo am-pelatanan’ny Malagasy.
Vehivavy iray sy ny zanany norasarasain’ny jiolahy tamin’ny antsy BESALAMPY (225) 8 juillet 2020 Hofehezina ny fidirana an’Ambanja, vavahadin’i Diana sy Sava FIATREHANA NY COVID -19 (213) 8 juillet 2020 210 ireo voa tamin’ireo 578 natao fitiliana FIVOARAN’NY “COVID-19” ETO ANALAMANGA (171) 8 juillet 2020 Miverina amin’ny fihibohana tanteraka Analamanga, miato avokoa ny fampianarana COVID-19 (137) 8 juillet 2020 Naato ny sampan-draharaha sasany noho ny covid-19 FODIANA AN-TANINDRAZANA (133) 8 juillet 2020 Nahatratra mpijibika dingadingana nampiasa fitaovana voarara MPANARA-MASO NY JONO AO NOSY BE (131) 8 juillet 2020